Mazhinji maapplication uye maturusi anoshanda zvakanaka paMacOS Mojave | Ndinobva mac
Mazhinji maapplication uye maturusi anoshanda zvakanaka paMacOS Mojave
Vhiki rino takaisa iyo macOS Mojave beta imwe paMac mamirioni evashandisi uye zvichemo nezve kuenderana kwezvikumbiro kana matambudziko anogona kunge aine maturusi atinoshandisa mazuva ese kushanda mashoma.
Zviripachena isu takatarisana neye beta vhezheni uye izvi zvinofambisa mukana wekuti mamwe maapp akundikana mukuita kwawo, asi sekutonga kwese uye pasina kudikanwa kwevagadziri kukwidziridza maturusi eiyo nyowani yekushandisa system, ruzhinji runoshanda nemazvo.
Iwe unoreva here kuti isu tinogona kuisa iyo beta mune ese kesi?
Zvakanaka, uyu mubvunzo unonetsa uye ndewekuti pachezvayo nekuisa iyo beta yakaiswa pane yekunze dhisiki kuti irege kukanganisa basa rangu, izvo zvatinofanirwa kufunga ndezvekuti inogona kukundikana panguva yakafanira kwazvo uye yotisiya isu takashama, saka zvirokwazvo hatizove nematambudziko, kungwarira. Iyo nyowani vhezheni yeMacOS Mojave haina kuwedzera shanduko yakawandisa maererano nekushanda kwesystem, asi zvakapesana, inguva yakagadziridzwa ye macOS High Sierra umo matambudziko anogadziriswa uye kwese system chengetedzo inovandudzwa.
Kana iwe uchitsamira paMac yebasa, zvakanaka kuti uiise pachikamu kana pendrive yekunze kudzivirira matambudziko, kana iwe uchida iwe unogona kuisa iyo beta vhezheni seinoshanda system asi ziva kuti mamwe maapplication anogona kukundikana iwe. Nezuro chaiye patakagadzira vhiki nevhiki Apple podcast nevatinoshanda navo kubva kuActualidad iPhone, isu takatambura mhedzisiro yekuvandudza tisingatarise uye iyo Hangouts app yeMac iyo yataimboita kuti podcast irarame, iyo plugin yeiyo yepamhepo nhepfenyuro yanga ichikundikana zvakanyanya kana zvirinani zvataurwa (nezvikanganiso zvezwi).
Chero zvazvingaitika, munguva pfupi iri kutevera tichava nemabheji evoruzhinji uye mavari mune "kuchengetedzeka" zvakanyanya maererano nemaapp, zvine musoro zvinogona kunge zvisingawirirane nechishandiso kana chishandiso senge beta vhezheni yevagadziri, asi mune izvo ndizvo kazhinji inogadzikana. Zvakanakisa pane zvese ndezvekuti isu tine chaiyo yakagadzikana beta vhezheni uye mashoma mabugs kana matambudziko achatipa, Une macOS Mojave beta yakaiswa here? Wakave nematambudziko neapp here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » MacOS Mojave » Mazhinji maapplication uye maturusi anoshanda zvakanaka paMacOS Mojave
WatchOS 2 beta 4.3.2 yevagadziri ikozvino yaburitswa
GIF Gadzira Movavi, inowanikwa chete ma1,09 euros